‘बन्दीपुर गण्डकीको दोस्रो पर्यटकीय क्षेत्र हो, मिनी ग्रेटवाल निर्माण हुन्छ’
पंकज धामी आइतबार, साउन २६, २०७६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुर्णसिंह थापाले जनताका आधाभूत आवश्यकताहरु पुरा गर्नेगरि काम गरिरहेका बताएका छन् ।
चुनावको समयमा जनतासामु गरिएका वाचाअनुसार काम गरिरहेको भन्दै अध्यक्ष थापाले भने, ‘पर्यटन, कृषि, शिक्षा र पूर्वाधार बन्दीपुर सम्वृद्धिको आधार त्यसलाई नै टेकेर हामीले काम गरेका छौं । हिजो हामीले घोषणा पत्रमा लेखेका थियौं आधारभूत कुराहरु, उज्यालो बन्दीपुर, सबै गाउँमा सडक पु¥याउँछौं, खानेपानीहरुको सुविधाहरु उपलब्ध गराउँछौं हामीले जुन बोलेका थियौ आज हामीले पुरा गरेका छौं ।’
साविकमा गाविसको आधा भागमा बत्ती पनि नभएको अवस्थामा अहिले सबै ठाउँमा बत्ति पुगेको उनी बताउँछन् । ‘धेरै ठाउँमा सडक पु¥याएका छौँ आगामी वर्ष सबै वडा कार्यालयहरुमा पनि पिच गर्नेगरि काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने ।
कृषि प्रयोजनका लागि सबै गाउँमा गाउँपालिकाले सडक पु¥याएको छ । सडक विकासको मुख्य पूर्वाधार मानिने सडकमार्गले सबै गाउँलाई जोडिसकेपछि अब महत्वपूर्ण सडकहरु कालोपत्रे गर्ने तयारी भइहरको उनले बताए ।
सडक खन्ने मामलामा आफुहरु अन्य स्थानीय तह भन्दा फरक रहेको अध्यक्ष थापाले बताएका छन् । ‘सडक डोजरले नै खन्ने हो तर सडकको डिपिआर नबनाई, इन्जिनियरिङ अध्ययन नगरि सडक खन्नाले विभिन्न समयस्य उत्पन्न हुने गरेको’ उनले भने, हामीले डिपिआएर निर्माण गरेपछि मात्रै सडक बनाएका छौँ । कुनै जोखिम छैन् । हामीले अरुले जस्तो हचुवाको भरमा काम गरेका छैनौं ।’
पर्यटन विकासका लागि महत्वपूर्ण काम गरिरहेको उनले बताए । यसका लागि डिपिआएर तयार पार्ने काम भइरहेको भन्दै उनले प्रदेशको दोस्रो पर्यटकीय गन्तव्य क्षेत्र बन्दीपुर उदाएकाले यसैका लागि काम गरिरहेको बताए ।
‘यहाँ हजारौंको संख्यामा पर्यटकहरु आउने गर्छन् । पर्यटकलाई भूलाउन हामीले सकेका छैनौं । पर्यटकलाई कसरी भूलाउने कसरी पर्यटकले खर्च गर्ने ठाउँहरु बनाउने कुरा हामीले गरेका छौं । मिनी ग्रेटवालको कन्सेप्टमा काम गरिराखेका छौं,’ उनले भने ।
सिसाको भ्यूपोइन्ट निर्माणका लागि डिपिआएर निर्माण गरिरहेको बन्दीपुरमा एसीयाकै ठूलो सिद्धगुफा समेत रहेको छ । अहिलेसम्मका काममध्ये एक महत्वपूर्णकाम पृथ्वी हाइवेबाट बन्दीपुर पुग्ने बाटो ८ किलोमिटरको साँघुरो सडकलाई फराकिलो बनाइएको छ । अध्यक्ष थापाले उक्त काम चुनौतिपूर्ण भएपनि आफुहरुले चुनौति मोलेर काम गरिरहेको बताए । साँघुरो बाटोलाई फराकिलो बनाएसँगै त्यसलाई पिच गर्न मात्रै बाँकी रहेको छ ।
आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्ममा जसरी पनि काम सम्पन्न गर्ने गरि ऐन बनेको उनले बताए । धेरै स्थानीय तहहरुमा असार मसान्तमा मात्रै काम फरफारक गर्ने प्रवृति रहेको भन्दै उनले आफुहरुको गाउँपालिकामा त्यस्ता अवस्था नरहेको बताए ।
‘ठूलठूला कामहरु पनि हामीले सूचना निकाल्ने प्रकृयामा छौँ । धेरै ठाउँमा अल्पमत र बहुमतका कारण काम गर्न नसकिएको कुराहरुपनि आएका छन् । हामीले जनताका मन बुझाउने योजनाहरु ल्याएर आयोँ भने अल्पमत र बहुमतको कुरा आउँदैन् । देश र जनताप्रति बफादार भएर काम गरेमा यस्तो हुँदैन् । भन्ने संस्कार हामीले सिकेका छौँ,’ उनले भने ।
बन्दीपुरको समृद्धि र सुशासनका लागि गुरुयोजना निर्माण भइरहेको र अबको दिनमा त्यसैअनुसार काम अगाडी बढाइएको उनले बताए ।
रोशनीले बयान फेरे के हुन्छ ? अधिवक्ता यस्तो भन्छन् (भिडियो) आइतबार, कात्तिक ३, २०७६
महराले २५ दिनसम्म बयान नदिए के हुन्छ ? (भिडियो) आइतबार, कात्तिक ३, २०७६
'नेपाल ल्याण्डलक्ड होइन ल्याण्डलिङ्कड देश बन्छ' शुक्रबार, असोज २४, २०७६